खाती गुटले नै प्रताप खातीलाई निकाल्यो पार्टीबाट : मलाई पार्टीबाट निकालेको कुरा मलाई नै थाहा छैन-खाती - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारखाती गुटले नै प्रताप खातीलाई निकाल्यो पार्टीबाट : मलाई पार्टीबाट निकालेको कुरा मलाई नै थाहा छैन-खाती
खातीले ‘मलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्नेहरू को हुन्? भन्ने प्रश्न गरेका छन्। जसले निकाल्यौं भनिरहेका छन् उनीहरूलाई आफूले नै लिगमा ल्याएको भन्दै खातीले आफूलाई निकाल्नेहरूले पार्टीको संविधान नै नपढेको जनाएका छन्। खातीले सोझो भाषामा एसपी शर्माहरूलाई ‘स्वार्थी’ र ‘बङ्गालका दलालहरू’ भनेका छन्।
त्यसै पनि थोरै समर्थक र थोरै नेतृत्व रहेको पार्टी हो गोर्खालिग। त्यो पनि दुइगुटमा विभाजित। खाती गुट र भारती गुटको नामले पहाडमा चिनिएको अखिल भारतीय गोर्खालिगको इतिहासमा फेरि अर्को अध्याय थपिएको छ। किन भने प्रताप खाती गुटले नै प्रताप खातीलाई गोर्खालिगबाट निकालेको छ।
दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फ्रन्टका एसपी शर्मा, बिक्रम आदित्य राईलगायत7जनाको टोली खाती गुट गोर्खालिगमा सामेल बनेका थिए। यसरी सामेल बनेका एसपी शर्मालाई खाती गुट लिगको महासचिव बनाइएको थियो। अध्यक्ष थिए मिना सुब्बा। उपाध्यक्ष थिए विक्रामआदित्य राई। प्रताप खाती थिए कार्यकारी अध्यक्ष।
सोही खेमाका उपाध्यक्ष विक्रमआदित्य राईले कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खातीलाई पार्टीबाट निकालिएको घोषणा गरेका छन्। उनले यता खातीलाई पार्टीबाट निकालेको घोषणासितै उता भारती गुट र खाती गुटको विवाद साम्य भएको र अब दुवै गुट मिलेर पुरानो अखिल भारतीय गोर्खालिग बनेको घोषणा पनि गरेका छन्।
अब गोर्खालिगका नेता भारती तामाङ
6 सेप्टेम्बर 2020 को दिन एसपी शर्माहरूको समूह खाती गुटमा पसेका हुन्। उनीहरू लिगमा पस्ने वित्तिकै7दिसम्बरको दिन गोर्खालिगको जनसभा गरेका थिए। धेरैवर्षपछि गोर्खालिगले यो जनसभा दार्जिलिङको मोटर स्ट्याण्डमा गरेको थियो। जनसभामा दुवै गुटका नेतृत्व उपस्थित थिए।
‘त्यो जनसभामा पनि प्रताप खातीले भारती गुटमाथि आपत्ति जनाएका थिए,’ एसपी शर्माले खबरम्यागजिनसित भने, ‘हामी शुरुदेखि नै खेमामा विभाजन होइन खेमाको मेलमिलाप चाहनथ्यौं। हामी पस्ने वित्तिकै केही दिनमा नै हामीले भारती गुटका नेतृत्वसित भेटेर गोर्खालिगको पुरानो गरिमा फर्काउन मिल्न आग्रह गरेका थियौं।’
72 औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हिजोमात्र गोर्खालिगका नेता मदन तामाङको सालिग उनको हत्या गरिएको ठाउँमा नै शर्माहरूले स्थापित गरिसकेका छन्। हिजो मदन तामाङको सालिग स्थापित भयो, आज प्रताप खातीलाई पार्टीबाट निकालियो।
‘अबोप्रान्त गुटको विवाद सकिएको छ, आजदेखि सिङ्गो गोर्खालिग बनेको छ,’ खाती गुट गोर्खालिगका उपाध्यक्ष विक्रम आदित्य राईले आज मिडियामा भनेका छन्, ‘आजदेखि हामी भारती तामाङको नेतृत्वलाई नै शिरोपर गर्नेछौं।’
खातीलाई किन निकालियो?
21 दिसम्बरको दिन भाजपाका सांसद राजु विष्टले भाजपासित गठबन्धनमा रहेका दलका प्रतिनिधिहरूलाई दिल्ली लिएर गए। त्यो समूहमा प्रताप खाती पनि सामेल बनेका थिए। केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहालाई भेटेपछि प्रताप खातीले भनेका थिए, ‘एनि फाइन मर्निङ, केन्द्रले गोर्खाका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्नेछ। कुनै बिहान उनीहरू उठ्दा आफूलाई जनजाति भइसकेको पाउनेछन्।’
तर खातीको यो वयान आउने वित्तिकै सोसल मिडियामा उनीविरुद्ध उनकै महासचिव एसपी शर्माले आपत्ति जनाएका थिए।
‘कुनै पनि पार्टीको आचारसंहिता हुन्छ, संविधान हुन्छ। पार्टीले गर्ने हरेक निर्णय पार्टीलाई थाहा हुनुपर्छ। आफ्नो नीजि निर्णय पार्टीलाई थोप्नु हुँदैन,’ आज एसपी शर्माले खबरम्यागजिनसित भने, ‘केन्द्रिय गृहमन्त्रीसित जसले पनि भेट्न पाउँछन्। यदि प्रताप खाती गोर्खालिगलाई प्रतिनिधित्व गरेर गएका हुन् भने त्यसबारे पार्टीलाई थाहा हुनुपर्थ्यो, तर त्यस्तो भएन। उनी नीजिरुपले केन्द्रिय गृमन्त्रीलाई भेट्न गए तर नाम आयो गोर्खालिगको। हामीले यसैबारे स्पष्टिकरण दिने आग्रह गरेका थियौं, तर उनले स्पष्टिकरण आजको मितिसम्म दिएनन्। यसैले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको हो।’
एसपी शर्माको आरोप हो, पार्टीको निर्णय, परामर्श र सुझबुझ बिना नै प्रताप खाती केन्द्रिय गृहमन्त्री भेट्न गए। उनी त्यसरी जाँदा पार्टीको सल्लाह लिइएन। यसरी पार्टीको नाम आउने गरी नीजिरुपले मनमानी गर्न मिल्दैन। त्यसैले उनलाई पार्टीबाट निकालिएको हो।
एसपी शर्माहरूले खाती केन्द्रिय गृहमन्त्री भेट्ने गुटमा सामेल बनेको खबर सोसल मिडियामार्फत थाहा पाएका हुन्। यसैले उनलाई यसबारे स्पष्टिकरण दिने आग्रह पनि सोसल मिडियामार्फत नै गरिएको थियो। हिजो मात्र 24 घन्टाको अल्टिमेटम दिँदै खातीलाई शर्माहरूले सोसल मिडियामार्फत नै स्पष्टिकरणको आग्रह गरेका थिए, तर खातीले स्पष्टिकरण दिएनन्।
खातीले पार्टीलाई आधिकारिकरुपले नबताइ गएको आरोपमा पार्टीबाट निकालिए पनि ‘तपाईँहरूले पार्टीले चिट्ठी काडेर आधिकारिकरुपले खातीलाई स्पष्टिकरण माग्नु भयो?’ भनेर खबरम्यागजिनले शर्मालाई प्रश्न गरेको थियो। ‘हामीले पार्टीबाट आधिकारिकरुपले पत्र काडेर खातीलाई स्पष्टिकरण मागेनौं,’ जवाबमा शर्माले भने, ‘सोसल मिडियाबाटै थाहा पायौं, सोसल मिडियाबाटै स्पष्टिकरण माग्यौं।’
खाती गुट र भारती गुट मिलिहालेको छैन- शर्मा
यता एउटा पोर्टलमा विक्रमआदित्य राईले दुइ गुटको विवाद सकिएको र उप्रान्त भारती तामाङकै नेतृत्वलाई शिरोपर गर्ने बताएका छन्, उता खबरम्यागजिनले शर्मासित बुझ्न चाहँदा ‘मिलिहालेको छैन’ भन्ने जवाब दिए।
‘हाम्रो उद्देश्य हो दुइ गुटको विवाद सक्ने र पुरानो गोर्खालिगको मर्यादा फर्काउने,’ शर्माले भने, ‘खातीलाई पार्टीबाट निकालिए पनि खाती गुट र भारती गुट आधिकारिकरुपले मिलिहालेको छैन। तर मिल्छ।’
प्रताप खातीलाई पार्टीबाट निकालिएपछि खातीको पक्षमा केवल अध्यक्ष मिना सुब्बा मात्र बाँकी रहेका छन्।
मलाई निकालेको कुरा मलाई नै थाहा छैन
सोसल मिडियामा प्रताप खातीलाई पार्टीबाट निकालिएको खबर फैलिएपछि खबरम्यागजिनले प्रताप खातीसित सम्पर्क गऱ्यो।
खबरम्यागजिन : तपाईँलाई पार्टीबाट निकालेको खबर आयो, खासमा कुरा के हो?
प्रताप खाती : कसले निकालेछ मलाई पार्टीबाट?
खबरम्यागजिन : एसपी शर्माहरूले निकालेको खबर छ नि
प्रताप खाती : हो र, मलाई पार्टीबाट निकालेको मलाई नै थाहा छैन। यसबारे अहिलेसम्म मलाई केही थाहा छैन।
खबरम्यागजिनसित बोल्न मन नगरे पनि एक पोर्टलसित भने खातीले ‘मलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्नेहरू को हुन्? भन्ने प्रश्न गरेका छन्। जसले निकाल्यौं भनिरहेका छन् उनीहरूलाई आफूले नै लिगमा ल्याएको भन्दै खातीले आफूलाई निकाल्नेहरूले पार्टीको संविधान नै नपढेको जनाएका छन्। खातीले सोझो भाषामा एसपी शर्माहरूलाई ‘स्वार्थी’ र ‘बङ्गालका दलालहरू’ भनेका छन्।
“मूर्तिको हिसाबकिताब खोज्छ भनेर यी सब कर्तुत गरिएको हो। तर उनीहरूलाई पार्टीको संविधानसमेत थाह छैन। उनीहरू त बङ्गालका दलालहरू हुन्। गोर्खा लीगलाई कमजोर गर्न यस्तो कर्तुत गरेका हुन्”, खातीले जनसंवाद पोर्टलसित भनेका छन्, ‘मलाई निष्कासित गरिने निर्णय गरिएको बैठकमा 31 जना केन्द्रिय सदस्यहरूमध्ये कतिजनाको उपस्थिति थियो? बैठक कहाँ कसको अध्यक्षमा भएको थियो? उक्त बैठकमा ककसको उपस्थिति थियो? जसले पनि पार्टीको संविधानविरुद्ध गएर मलाई निष्कासित गरिएको घोषणा गरे, उनीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्नेछु। यो मुद्दालाई म अदालतसम्म लिएर जानेछु।’
खासमा 27 दिसम्बरको दिन नै खातीले पार्टी अध्यक्ष मिना सुब्बालाई एसपी शर्माहरूले पार्टी विरुद्ध गतिविधि गरेको कारण कार्वाही गर्न भनेका थिए। सुब्बाले शर्माहरूलाई कारवाहीको लागि पत्र पनि पठाएकी थिइन्। त्यसपछि नै एसपी शर्माहरूले गोर्खालिगलाई कमजोर बनाउन र आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको खातीको जिकिर छ।